Mpanamboatra sy mpamatsy fiakarana | China Factory Lift Parking
Fiakarana fijanonana sy rafitra fitobian'ny fiaradia vokatra manandanja amin'ny fiainantsika andavanandro ka mahatonga ny toerana fanaovana fiantsonan'ny fiara miha kely. Fitaovana fijanonana telo metatra dia azo zaraina ho fitaovam-piarakodia telo habe ho an'ny tena, fitaovan'ny fijanonana telo heny semi-mandeha ho azy ary fitaovana fijanonana telo-metatra mandeha ho azy ao an-trano, ary koa fitaovana fijanonan'ny fiara telo-telo fampiasan'ny fianakaviana, ary feno Fitaovana fijanonana telo-metatra mandeha ho azy dia azo zaraina ho karazana sosona roa sosona na sosona marobe Fitaovana fijanonana telo-habe mandeha ho azy, fitaovana fijanonana mandeha ho azy telo mandeha ho azy ary rafitra fiambenana miendrika endrika telo mandeha ho azy.
China Daxlifter Rotary plate platform fiara manangana famolavolana manokana ho an'ny fampisehoana fiara, ny habeny sy ny fahaizany dia azo amboarina amin'ny fangatahanao. Ny sehatr'asa mihodina fiara dia mampiasa maotera fitaovana hafarana avo lenta mba hahazoana antoka fa afaka mihazakazaka milamina sy mihodina amin'ny hafaingam-pandeha ny sehatra rehefa miasa izany.
Ny fijanonan'i China Four Post Custom Made Car dia an'ny rafitra fijanonana kely izay malaza any amin'ny firenena eropeana sy ny fivarotana 4s. , ampahafantaro anay ny angona manokana ilainao
Ny tiltable Post Parking Lift dia mampiasa fomba fitondra mandeha amin'ny alikaola, ny solika famoahana hydraulic pump dia manosika ny silinder hydraulic hampiodina ny tabilao fijanonan'ny fiara miakatra sy hidina, hahatratra ny tanjon'ny fijanonana. afaka miditra na mivoaka.
4 Post Lift Parking dia iray amin'ireo fiakaran'ny fiara malaza indrindra eo amin'ny mpanjifanay. Izy io dia an'ny valet parking valet, izay miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso herinaratra. Toeram-paompy hydraulic no mitondra azy. Ny karazana fiakaran'ny fiara toy izany dia mety ho an'ny fiara maivana na ho an'ny fiara mavesatra.
wo Post Car Lift dia mampiasa fomba fitondra mandeha amin'ny alikaola, menaka faneriterena avo lenta manosika ny varingarina hidroara hampiodina ny tabilaon'ny fiara miakatra sy hidina, hahatratra ny tanjon'ny fijanonana. afaka miditra na mivoaka. Manome namboarina
Betsaka ny tombony azo avy amin'ny fiakarana fijanonana fiara : 1.Fanapahan-kevitra ara-teknika sy ara-toekarena avo lenta Fitaovam-piarakodia telo refy manana fahaizam-piarakodia lehibe. Dian-tongotra kely, misy ihany koa Fitaovana fijanonana telo metatra Fitaovana fijanonana telo metatra (sary 8) Apetraho ny karazana fiara rehetra, indrindra ny fiara. Na izany aza, ny fampiasam-bola dia ambany noho ny garazy fitobiana ambanin'ny tany manana fahaiza-manao mitovy, fohy ny vanim-potoana fananganana, ambany ny fanjifana herinaratra, ary ny habaky ny gorodona dia kely kokoa noho ny garazy ambanin'ny tany. 2.Ny endrika ivelany dia mifamatotra amin'ny trano, ary mety ny fitantanana. Ireo fitaovana fijanonana telo-metatra dia mety indrindra amin'ny toeram-pivarotana, hotely, tranon'ny birao ary faritra fizahan-tany. Fitaovana maro amin'ny ankapobeny no tsy mitaky mpandraharaha matihanina, ary ny mpamily irery ihany no afaka mameno azy. 3.Ny fotodrafitrasa fanohanana feno sy ny garazy "maitso" miaro ny tontolo iainana dia manana rafitra fiarovana tanteraka, toy ny fitaovana fanamafisana ny sakana, fitaovana fanakanana vonjy maika, fitaovana fisorohana tampoka, fitaovana fiarovana be loatra, fitaovana fiarovana an-tsokosoko, avo lenta ary avo lenta fitaovam-pitadiavana fiara sns. Ny fizotry ny fidirana dia azo fenoina amin'ny tanana, na azo vitaina ho azy miaraka amin'ny fitaovan'ny solosaina, izay mamela toerana malalaka ihany koa ho an'ny fampandrosoana sy ny famolavolana ho avy. Koa satria ny fiara dia mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha ambany ihany mandritra ny fotoana fohy mandritra ny fizotry ny fidirana, dia somary kely ny tabataba sy ny setroka.